नेयमारको अगाडी लुकालु चुनौती, 'रेड डेविल्स' लाई जित्न ब्राजीलले अपनाउनुपर्छ यी ४ रणनिति - Seto Khabar नेयमारको अगाडी लुकालु चुनौती, 'रेड डेविल्स' लाई जित्न ब्राजीलले अपनाउनुपर्छ यी ४ रणनिति - Seto Khabar
नेयमारको अगाडी लुकालु चुनौती, ‘रेड डेविल्स’ लाई जित्न ब्राजीलले अपनाउनुपर्छ यी ४ रणनिति
July 6, 2018 सेतो खबर
ब्राजील र बेल्जियमको विच शुक्रबार फिफा विश्वकप २०१८ को हाईभोल्टेज क्वार्टरफाइनल म्याच हुदैछ । दुबै टिम निकै राम्रो फर्ममा छन् र म्याच धेरै रोमाञ्चक हुने आशा गरीएको छ ।
ब्राजीलले राउण्ड अफ १६ मा मेक्सिकोलाई २–० ले पराजित गरेको थियो भने यता बेल्जियमलाई एशियाली टिम जापानसँग संघर्षपुर्ण जित हासिल गर्नु पर्यो । यद्यपी, बेल्जियमको प्रशंसा गनुपर्ने हुन्छ, दुई गोलले पछाडि परेपछि पनि डेविल्सले जोडदार रुपमा खेलमा फर्किदा खेल ३–२ ले जिते ।
ब्राजील पछिल्ला केही म्याचदेखी राम्रो फर्ममा देखिएको छ किनभने उसले पुरै रुस विश्वकपमा केबल एक गोलमात्र खाएको छ । यानी उसको डिफेन्स धेरै राम्रो छ । ब्राजील इतिहास रच्नको लागी निकै नजिक पुगेको छ । उसँगै छैठौ पटक विश्वकप च्याम्पियन बन्ने सुनौलो मौका पनि छ ।
अब उसलाई सेमिफाइनलमा प्रवेशगर्नको लागी यी चार कुरालाई विशेष ध्यानमा राख्नु पर्ने हुन्छ ।
१. एडन हेजार्डलाई विशेष ध्यान दिने
बेल्जियमका कप्तानले रुसमा अहिलेसम्म शानदार प्रदर्शन गरिरहेका छन् । हेजार्ड विरोधी टिमकाृे लागी खतरनाक सावित हुदै आइरहेका छन् । उनले अहिलेसम्म फिफा विश्वकप २०१८ मा दुई गोल गरे र दुई पटक सहायक भुमिका पनि निर्वाह गरीसकेका छन् । कुनै पनि टिमले अहिलेसम्म हेजार्डको खतरालाई रोक्न सकेका छेनन । ब्राजीललाई यदी प्रतिस्पर्धा जित्नुछ भने हेजार्डलाई विशेष नजर राख्नुपर्ने हुन्छ र गोल ब्लक गर्ने विशेष रणनिति लिनुपर्ने हुन्छ ।
२. ग्रेबिएल जीससलाई दिनु पर्ने हुन्छ धेरै पास
ग्रेविएल जीससले रुस विश्वकपमा कुनै गोल त गरेका छैनन तर प्रदर्शन धेरै राम्रो गरेका छन् । जीसस ब्राजीलका स्ट्राइकर नेयमार र कौटिन्होको लागी गोल गर्ने बल बनाएका देखीएका छन् । जीसससँग बेल्जियमको डिफेन्सलाई छक्काउदै बल अगाडि लाने प्रतिभा छ भने ब्राजीलका अन्य खेलाडीले उनलाई चाडो भन्दा चाडो बल दिनुपर्ने हुन्छ ।
३. बेल्जियमलाई बायाँतर्फबाट धेरै प्रहार गनुपर्ने हुन्छ ।
बेल्जियमको टिम तीन डिफेन्डरसँगै मैदानमा उत्रनेछन् । ब्राजीलको कोशीश बेल्जियमको बायाँ तर्फबाट आक्रमक हुनुपर्नैहुन्छ ताकि बेल्जियको डिफेन्सलाई तोड्दै गोल गर्नमा सफलता हासिल होस । विलियनले मेक्सिको को विरुद्ध शानदार प्रदर्शन गरेका थिए भने आजको खेलमा पनि राम्रो खेलको अपेक्षा ब्राजीलले गरेको छ । यदि विलियनले वायाँ पटिमा राम्रो प्रदर्शन गरेमा ब्राजीलको टिम गोल गर्ने मौका बनाउन सक्छ ।
४. डिफेन्सलाई राख्नुपर्ने हुन्छ विशेष ख्याल
ब्राजीलले टिटेको प्रशिक्षणमा आफनो प्रदर्शनमा राम्रो सुधार गर्दे लगेको छ । ब्राजीलले पछिल्लो २५ म्याचमा १९ खेलमा कुनै पनि गोल खाएको छैन यानी क्लीनसिट्स म्याच खेलेको छ । यदी ब्राजील यही लयलाई बेल्जियम विरुद्ध जारी राखेमा उसलाई त्यो फाइदाजनक हुनेछ । बेल्जियमसँग राम्रा स्ट्राइकर छन् र उनीहरु ब्राजीललाई रोक्न हरसम्भव प्रयास गर्नेछन् ।